USomlomo uzibophezele ukwelusa uMkhandlu – Bayede News
USomlomo uzibophezele ukwelusa uMkhandlu
USOMLOMO kaMasipala iBig 5 Hlabisa uthi
Posted on 19/07/2019 19/07/2019 by Bayede-News
USOMLOMO kaMasipala iBig 5 Hlabisa uthi njengoba esanda kuqokelwa lesi sikhundla ukuqapha ukusebenza kwamakhansela nokuhlala kwemihlangano kuseqhulwini kuyena.UMnu uGeorge Mchunu uqokelwe kulesi sikhundla emva kokuba sishiywe uMnu uComfort Khumalo oseyiMeya yalo Masipala. UMchunu uthe kule minyaka emibili azoyihlala njengeSomlomo unezinhlelo ezinqala zokukuqinisekisa ukuthi umphakathi uthola izidingo ngendlela namakhansela ayasebenza.
Phakathi kokunye athe uzoqinisekisa ukuthi kuyenzeka ukuhlala kwemihlangano yoMkhandlu Wamakhansela. Uthe ufuna ukuthi njalo ngekota ahlangane namakhansela, ngaphandle uma kunomhlangano oyisipesheli. Uveze ukuthi uzokubeka emahlombe akhe ukuqinisekisa ukuthi amakhansela abanemihlangano nomphakathi njalo ngekota ezokwethula umbiko ngezinto esezenzekile nezozikwenzeka.
Eqhubeka uthe lokhu kuzosiza kakhulu ukusebenza koMkhandlu ngendlela, kuyiswe nezidingo emphakathini ngendlela ozicele ngayo. Uthe ufuna ukuqinisekisa ukuthi amaportfolio committee ayahlangana. UMchunu ufuna ukuthi uma kunezinqumo ezithathwe wumkhandlu zilandelwe.Okunye athe kuseqhulwini ukuhambela amawadi wonke kamasipala ayolalela izikhalo nemibono yomphakathi.
“Uma sesizizwile izikhalo ngizobe sengiqhamuka neqhinga lokuthi kuzolungiswa kanjani lokho abakhala ngakho. Sizohamba neMinyango kaHulumeni ukuze uma kunombuzo eqondene nayo iziphendulele. Kubalulekile ukuthi umphakathi ufundiswe ngokusebenza kukamasipala. Uthola ukuthi umphakathi ufuna ekhanseleni izinto eziphethwe wumasipala wesifunda, noma isifundazwe noma uhulumeni kazwelonke. Kumele wazi ukuthi yikuphi okwenziwa umasipala wendawo nokwenziwa owesifundazwe nokazwelonke. Sizohlela ukuhlangana nongqongqoshe abahlukene beminyango sikhulume ngokusebenza kwamahhovisi asondelene nomasipala ngoba kwesinye isikhathi asikuthole ukusizakala kuwona,” kusho uMchunu.
Uqhube wathi ukuze indawo yaseBig 5 Hlabisa ithuthuke kumele banxenxe osomabhizinisi abazotshala imali endaweni ukuze kuthuthuke umnotho.